WARBIXIN: Jose Mourinho oo lambarada ka bedelaya qaar ka mid ah xiddigaha Manchester United… (Yaa ka mid ah xiddigaha lambarada laga siibi doono?) – Gool FM
WARBIXIN: Jose Mourinho oo lambarada ka bedelaya qaar ka mid ah xiddigaha Manchester United… (Yaa ka mid ah xiddigaha lambarada laga siibi doono?)
Haaruun July 10, 2016
(Manchester) 10 Luuliyo 2016 – Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waydiisan doona qaar ka mid ah xiddigaha kooxda inay iska siibaan lambarada ay iminka wataan oo ay qaataan kuwo cusub.
Marcus Rasford, Jesse Lingard iyo Matteo Darmian ayaa ka mid ah xiddigaha uu macallin Jose Mourinho lambarada ka bedeli doono.
Tababaraha reer Portugal ayaa door bidaya in dhammaan lambarada ay xiran doonaan xiddigaha kooxda Manchester United ay ka hooseeyaa lambarka 30-aad, iyadoo lambarka 30-ka ka sarreeya ay ku ciyaarayeen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay xiddigaha Man United qaarkood, Mourinho ayaana haatan ku tala jiro inuu xadido lambarada ka sarreeyo (No 30).
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa inuusan Mourinho qasbi doonin ciyaaryahannada, isla markaan caqabad kala kulmi doonin in xiddigahan ay qaataan lambaro cusub.
Bastian Schweinsteiger ayaa hadda kooxda u qaata lambarka 31-aad oo uu inta ugu badan xirfaddiisa ciyaareed ku ciyaaray, waxaana la ogeyn in qorsha Mourinho ee xilli ciyaareedka soo socda uu saamayn doono.
Si kastaba ha ahaatee, xiddigaha sida Rashford oo xiran lambar (39), Lingard (35), Darmian (36), Cameron Borthwick-Jackson (43) iyo Timothy Fosu-Mensah (51) ayay u badan tahay inay xiran doonaan lambaro cusub oo loo qoondeeyey.
Saxiixyada cusub ee kooxda Zlatan Ibrahimovic iyo Henrikh Mkhitaryan ayaan wali la siin lambarada ay xiran doonaan, waxaana ay u muuqataa in la siin doono doorashada koowaad ka hor da’yarta.
Inkastoo Jose Mourinho uu sheegay in lambarada kooxda aysan ka sare mari doonin (No 30) ayaa haddana lambarada la heli karo oo bannaan waxaa ka mid ah 3, 6, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26 iyo 29.
KACDOONKA CAS: Jose Mourinho oo sideed ka diri doona Old Trafford si uu Paul Pogba ugu gogol xaaro....Ogow kuwa ay goyn doonto
Ibrahimovic oo muuqaal loo soo duubay! "Hal boqor oo kaliya ayey leedahay Manchester United laakiin hadii aad dooneyso waad noqon kartaa wiilkiisa!"